FADEEXAD CUSUB: Sariirta Ayuu Dib Ugu Tuuray, Waanu Kufsaday… Waxaan Hayaa Boqollaal Farriimood Iyo Codad – CRISTIANO RONALDO Oo Kiis Kale Kusoo Furtay Iyo Gabadh Kale Oo Caddaymo U Haysa Dhaqan-xumadiisa – Cadalool.com
FADEEXAD CUSUB: Sariirta Ayuu Dib Ugu Tuuray, Waanu Kufsaday… Waxaan Hayaa Boqollaal Farriimood Iyo Codad – CRISTIANO RONALDO Oo Kiis Kale Kusoo Furtay Iyo Gabadh Kale Oo Caddaymo U Haysa Dhaqan-xumadiisa
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa lugaha kula jira fadeexad cusub, kaddib markii haweenay caan ah ay sheegtay inay hayso caddaymo badan oo muujinaya inuu yahay qof dhaqan xun, waalan oo wax walba ka suurtoobaan.
Jasmine Lennard iyo Cristiano Ronaldo waxay lahaayeen xidhiidh muddo laga joogo toban sannadood, laakiin in dhexe ayay suuqa kala galeen ka hor intii aanay 18-kii bilood ee ugu dambeeyey yeelanin xidhiidh cusub inkasta oo Ronaldo uu leeyahay xaas u dhashay afar carruur ah oo ay ku jiraan laba mataanood.
Haweenaydan oo lagu magacaabo Jasmine Lennard oo ah kuwa dharka xayaysiiya, ayaa waxay tilmaantay inay hayso boqollaal farriimood oo uu usoo diray Cristiano Ronaldo, iyo codad ay ka qabatay xilliyo ay telefoonka ka wada hadlayeen, kuwaas oo ay sheegtay inay gacanta ka galinayso gabadh lagu magacaabo Mayorga oo ku nool dalka Maraykanka oo la sheegay inuu Cristiano Ronaldo ku kufsaday dalka Maraykanka.
Ronaldo oo la dhibaataysan fadeexadda hore, ayaa waxay Jasmine ku hanjabtay inay qareennada Mayorga gacanta ka gelinayso caddaymo fara badan oo ay hayso oo muujinaya in aanu Ronaldo ahayn qof hagaagsan marka uu dumarka arko, iyadoo ku doodday inuu yahay qof waalan oo aanu miyirkiisu dhamayn.
Haweenaydan caanka ah, waxa kale oo ay tilmaantay in Ronaldo uu yahay beenaale ay wax walba ka suuroobaan, waxayna soo bandhigtay in caddaymaheedu ay taageero u noqonayaan Mayorga.
“Waa ey waalan, dadkuna fikir kama haystaan xaqiiqada shaqsiyaddiisa.” Sidaas waxa tidhi Jasmine oo ay da’deedu tahay 33 jir.
“Dib ugama sii fadhiisanayo intan wax ka badan, mana daawanayo beentiisa. Waxaan samaynayaa wax walba oo karaankayga ah oo aan ku caawin karayo iyada (Mayorga). Waxaan hayaa boqollaal farriimood iyo codad duuban oo qiimo badan u yeelanaya Kathryn iyo kooxdeeda qareenada, waxaanay muujinayaan (codadka iyo farriimuhu) sida uu yahay dhaqankiisu.” Ayey mar kale ku tidhi qoraal ay ku baahisay barteeda Twitterka.
Sannadkii 2009 ayaa Ronaldo oo ka mid ah Manchester United waxa uu kooxdiisa ula safray Maraykanka, waxaanay hotel ku yaalla Las Vegas ku kulmeen Kathryn Mayorga, waxaanu ugu geystay kufsi sida sir-faafiyaha Football Leaks shaaciyey, kuna doodday Mayorga, kaddib waxa uu siiyey lacag dhan 287,000 Gini oo uu kula heshiiyey in aanay cidna u sheegin wixii uu ku sameeyey.
Ronaldo ayaa ka hor intii aanu kufsiga samaynin waxa uu Mayorga u kexeeyey qolkii uu ka degganaa hotelka si ay iskaga soo beddesho dharkii ay xidhnayd oo wax kaga daateen, isla markii ay qolka galeenna waxa uu u dhiibay lebbis midabkiisu casaan yahay. Markii ay isku dayday inay xidhato, waxa uu si degdeg ah ugu soo dhaqaaqay halkii ay taagnayd isaga oo ka dalbanaya galmo, balse markii ay diiday uu qasbay.
Sida fadeexaddan lagu sheegay, markii ay Mayorga diiday waxa uu ka doonayo, waxa uu weydiistay shumis laakiin iyada ayaa shuruud ku xidhay ahayd inuu u ogolaado inay iska baxdo, balse wuxuu dib ugu tuuray sariir ka dambaysay, halkaasna waxa ka dhacay kufsiga.
Jasmine ayaa xogtan waxay barbar-dhigtay hab-dhaqanka ay ku taqaanay Ronaldo oo ay muddo dheer xidhiidh lahayd, waxaanay ku tilmaantay shaqsi aan naftiisa maamuli karin mararka qaadkood, ayna u dheer tahay been.
Qirashadii Ronaldo iyo Caddaymihii Hore Loo Hayey
Sir fashiliyaha Football Leaks ayaa talaabo kale oo wayn sare ugu qaaday soo bandhigista kiiskii kufsiga ahaa ee lagu soo eedeeyay Crisitano Ronaldo waxaana la daabacay xogta su’aalihii ay booliisku waydiiyeen Cristiano Ronaldo ee uu ku qirtay in gabadha soo eedaysay ee Kathryn Mayorga ayna raali ka ahayn markii uu galmo la sameeyay sanadkii 2009 kii.
Majalada dalka Jarmalka ka soo baxda ee Der Spiegel oo si joogto ah loogu daabaco sir kasta oo lagu soo helo Football Leaks ayaa shaaciyay in Crisitano Ronaldoo uu si buuxda u qirtay in galmadii dhex martay isaga iyo Kathryn Mayorga ay ahayd mid ayna raali ka ahayn.
Kathryn Mayorga oo 35 sano jir ah ayaa Cristiano Ronaldo ku soo dacwaysay in sanadkii 2009 kii uu kufsaday markii ay ku kulmeen Hotel Palms intii lagu jiray fasaxii June 2009 laakiin inkasta oo Ronaldo iyo qareenadiisu ay hore u beeniyeen waxaa hadda la soo bandhigay xogta jawaabihii uu Ronaldo bixiyay markii ay qareenadu su’aalo waydiiyeen sanadkii 2009 kii.
Markii su’aalaha hadda la shaaciyay la waydiinayay Ronaldo waxaa magacyadooda loo tixraacay xarfo iyada oo magaca Ronaldo loo qaatay X halka magaca Kathryn Mayorga loo qaatay Ms C iyada oo halkan aanu idiinku soo gudbin doono wixii Ronaldo la waydiiyay iyo jawaabihii uu bixiyay.
Sida dhokumentiga la shaaciyay ku xusan waxa uu qareenku ciyaartoyga waydiiyay: “Maxaa adiga lagugu yidhi isla markaana maxay Ms C kuu sheegtay adiga?”.
Wuxuuna Ronaldo ku jawaabay: “Waxay ii sheegtay in ayna wax haboon ahayn in galmo la sameeyo, ee tan iyo markii ay ila kulmeen. Inkasta oo ay xataa sidaas ahayd iyadu waxay i soo qabsatay ,……”.
Intaa kadib waxaa Ronaldo la waydiiyay in uu sharaxaad buuxda ka bixiyo faah faahinta sidii u dhaceen oo idil oo ay ugu horayso istaabashadoodii jidh ahaaneed ee ugu horaysay: “Nafteeda ayay diyaar iiga dhigtay, dhinaceeda ayay sariirta ugu jiiftay, aniguna gadaal ayaan kaga imid, dhibaato ayay ahayd, shan ilaa todoba daqiiqo ismaanu badalin”.
” Waxay ii sheegtay in ayna doonayn, laakiin nafteeda ayay diyaar iiga dhigtay, waqtiga oo dhami dhibaato ayuu ahaa, iyada ayaan dhinaca kale u rogay, wax deg deg ayayna ahayd, waxaa laga yabaaa in iyada uu burbur soo gaadhay markii aan soo qabsanayay”. ayuu Ronaldo sharaxaadiisa sii raaciyay.
Intaa kadib Ronaldo ayaa hadalkiisa ku sii daray : “Iyadu may doonayn in ay aniga i siiso, taas badalkeeda way dhaqaaqday, intaas wax kabadan kama garanayo wixii ay sheegtay markii ay iska kay riixaysay laakiin waxay sii waday in ay sheegto “Maya, ha samayn, anigu kuwa kale la mid ma ihi’ Kadib waan raali galiyay”.
Markii uu qareenku waydiiyay Ronaldo haddii Mayorga ay qaylisay markii uu jujuubayay waxa uu yidhi: “Waxay tidhi maya, dhawr jeer ayayna istaagtay. Waad i qasabtay qodon yahow, anigu kuwa kale la mid ma ihi”.
Laakiin xogta sirta ah ee laga helay su’aalihii uu qareenka Ronaldo waydiiyay xidiga reer Portugal ee bishii August 2009 kii ayaa gabi ahaanba khilaafsan war saxaafadeedkii ay soo saareen dhawaan markii ay dacwada Ronaldo ku socotaa sii xoogaysatay.
Cristiano Ronaldo oo 33 sano jir ah ayaa waraysi uu bixiyay intii kiisakn loo haystay waxa uu ku sheegay in wixii dhex maray isaga iyo Kathryn Mayorga ay ahaayeen wax raali iskaga ahaayeen balse sida xogtan cusub ka muuqata waxa uu ku qirtay in uu qasab jiray.
Cristain Ronaldo ayaa loo haystaa in uu fal kufsi ah ku kacay sanadkii 2009 kii isla markaana uu sanadkii 2010 kii bixiyay lacag ka badan 300 kun oo euros si uu u aamusiiyo gabadha uu dhibaatada u gaystay laakiin waxyaabaha laga fahmay war saxaafadeedkii qareenkiisa ayaa sharaxaad buuxda kiiskan ka bixinaysa.
Shantii Qodob Ee Laga Fahmay War Saxaafadeedii hore Hore U Soo Saaray Qareenka Ronaldo Isaga Oo Afka xidigan ku hadlayay iyo sida ay isku khilaafsan yihiin dhokumentiska la helay ee aanu idiin soo turjunay.
Qodobada Kale Ka Sii Akhriso Bogga 2-aad Iyo 4-aad